Zvekare tinodzokorora maapplication anogona kutorwa mahara mahara kwenguva pfupi. Ino nguva hatizokuzivisa iwe nezve chero mutambo unowanikwa mahara, nekuti mushure mekuona zviripo, hapana chakakosha. Nekudaro, kana tikataura nezve mafomu, tinogona kuwana akasiyana siyana, ayo anotibvumidza kugadzira zvinyorwa zvekutenga, kubika ndiro kubva mutsika dzakasiyana, kunyora pasi mazano edu anonakidza, kuyera kukwira kwenzvimbo uye kutarisa shanduko yezvose mari yepasi rose.
1 IDEAZ - Chengetedza mazano ako munzvimbo imwe chete
2 Shanduko - Mari Inoshandura / Kunze Kwekunze Mitengo
3 Chinyorwa Chezvitoro - Yeuka Kutenga
5 World Recipes - Inobika Nyika Gourmet
IDEAZ - Chengetedza mazano ako munzvimbo imwe chete
IDEAZ - Chengetedza mazano ako munzvimbo imwechete ane mutengo wenguva dzose we0,99 euros.
IDEAZ ndeyekushandisa kwakakodzera kuchengetedza edu ese mazano munzvimbo imwechete, kunyanya kana tiine fungidziro isingaite. IDEAZ haingotitenderi isu chete kugadzira zvinyorwa zvemavara asi zvakare inotibvumidza isu kuti tiwedzere odhiyo manotsi kana madhirowa pachiratidziro anomiririra mazano. IDEZ ine chiyero chepakati muApp Store ye3,5 nyeredzi kubva pa5 inogoneka.
Shanduko - Mari Inoshandura / Kunze Kwekunze Mitengo
Shanduko - Mari Inoshandura / Kunze Kwekunze Mitengo ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros
Ichi chishandiso chinotipa iwo mamiriro emari kutenderera pasirese munguva chaiyo, yakanakira avo vashandisi vanofamba nguva dzose kana vanoda kutenga mitengo pane akasiyana mawebhusaiti kutenderera pasirese. Iyi app ine chiyero chepakati chenyeredzi ina kubva pa4.
Chinyorwa cheGrocery - Yeuka Kutenga ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros.
Semutemo wenguva dzose, zvigadzirwa zvakasiyana zvemba yedu zvadzopera uye kuti tirege kuvimba nendangariro, tinowanzo gadzira runyorwa rwatinonyora pasi zvese zvatinoda. Grocesy Rondedzero chikumbiro chine basa rekugadzirisa rondedzero, nekuda kwezvakasiyana zvinyorwa zvine huwandu hukuru hwezvigadzirwa zviripo, zvekuti tinonyatsokanganwa chero chigadzirwa. Grocery Rondedzero ine avhareji chiyero che3,5 nyeredzi kubva pa5.
Terrain Radar Altimeter ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros.
Chishandiso ichi chinogona kutibatsira zvishoma kana tisina tsika yekuenda kunofamba mumhepo, kana nebhasikoro, nekuti zvinotibvumira kuverenga kukwirira kwenzvimbo yacho nemazvo chaizvo. Ichi chishandiso chine avhareji ratidziro ye3,5 nyeredzi pa5 inogoneka.
Terrain Radar Altimeter3,49 €
World Recipes - Inobika Nyika Gourmet
World Recipes - Cooks World Gourmet ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros.
Izvozvi zvatichiri muKisimusi, chishandiso ichi chichatibvumidza kugadzirira dzakasiyana siyana ndiro kubva kunyika dzakasiyana uye tsika, angave maAmerican, Indian, Mexico, Chinese, Greek, Italian, Japanese ... iri 4,5 nyeredzi kubva mashanu anogona.
World Recipes - Cook Nyika Gourmetvakasununguka
Ichokwadi Nezve Super Mario Run iyo "Yekusarudzika" Kuvhura